पुरुषहरुमा बाँझोपना आउने कारण के-के हुन्? :: स्वास्थ्यखबर :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
पुरुषहरुमा बाँझोपना आउने कारण के-के हुन्?
स्वास्थ्यखबर शनिबार, माघ २९, २०७८, ०९:४३:००
प्रश्न: पुरुषहरुमा बाँझोपना आउने कारण के के हुन्?
युरोलोजिस्ट डा सुवोध रेग्मीको उत्तर:
पुरुषहरुको अण्डकोषमा शुक्रकीट नबन्नु वा वीर्यमा शुक्रकीट नआउनुलाई 'एजोस्पर्मिया' भनिन्छ। एजोस्पर्मिया भएको हो वा होइन भन्ने थाहा पाउन वीर्य परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। वीर्य परीक्षणबाट शुक्रकीट भए/नभएको वा शुक्रकीट बन्ने प्रक्रियामा हुने गडबडीबारे पत्ता लगाउन सकिन्छ। सामान्यतया शुक्रकीट नबन्नु वा शुक्रकीट ननिस्कनु भनेको नै बाँझोपन हुनु हो। कसैकसैको अण्डकोषले शुक्रकीट उत्पादन नगरेको हुन सक्छ भने कसैको शुक्रकीट बने पनि निस्कने क्रममा अवरोध भएको हुन सक्छ।
बाँझोपनको अर्को कारण भनेको 'भ्यासेक्टोमी' पनि हो। भ्यासेक्टोमी गर्नु भनेको वीर्यनलीमा अवरोध ल्याउनु हो। भ्यासेक्टोमी गरेका तर पछि बच्चाको चाहाना भएर भ्यासेक्टोमी खोल्दा वीर्यनली अवरोध भई शुक्रकीट बाहिर ननिस्कन सक्छ। यसरी अवरोध भएको वीर्यनलीलाई शल्याक्रियाबाट खोल्न सकिन्छ। तर, शतप्रतिशत सफल हुन्छ भन्न सकिँदैन।
यस्तै, लामो समयसम्म गर्मीमा काम गर्नेहरुमा पनि शुक्रकीट बन्ने प्रक्रियामा गडबडी आउने गर्छ। तर, शुक्रकीट बन्न नसक्नुका ९० प्रतिशत कारण भने पत्ता लाग्दैनन्। यस्ता समस्या केही समयका लागि वा कुनै रोग विशेषले भएको छ भने औषधि उपचार गरेर ठिक गर्न सकिन्छ। तर, जन्मजात वा दीर्घकालीन समस्या भएकाहरुमा भने औषधि उपचारले काम नगर्न पनि सक्छ। यस्ता व्यक्तिलाई बच्चाको चाहना भएमा आइभिएफ (इन्भिट्रो फर्टिलाइजेसन) गर्न सकिन्छ। त्यसमा पनि शुक्रकीटले काम गरेन भने शुक्रकीट दान गर्नेहरुबाट शुक्रकीट लिनुपर्ने हुन्छ।
सरकारले प्रत्येक वडामा सामुदायिक नर्सिङ सेवा उपलब्ध गराउने १६ मिनेट पहिले